संसदको यसै सत्रमा सांसदहरूले हाम्रो माग विषय लिएर कुरा उठान गर्ने प्रतिश्रुति दिएका छन्- डा हर्कबहादुर छेत्री - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsसंसदको यसै सत्रमा सांसदहरूले हाम्रो माग विषय लिएर कुरा उठान गर्ने प्रतिश्रुति दिएका छन्- डा हर्कबहादुर छेत्री
“अलग राज्यको माग गर्ने सहि ठाउँ यहिँ नै हो अनि अलग राज्यको माग गर्ने सहि समय पनि यहिँ नै हो। त्यसैले गर्दा पुलिसबाट बारम्बार दबाउ आइरहेको भए तापनि हामी अडिग छौं अनि अलग राज्यको निम्ति दिल्लीमा कार्य गरिरहेका छौं।”
दिल्लीबाट जन आन्दोलन पार्टी अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले आज यसो भने। संसदमा चलिरहेको बजेट सेसन अवधि त्यहाँ उपस्थित बन्न आएका सांसदहरूलाई गोर्खाहरूको अलग राज्यको मागबारे अवगत गराउनका साथै उक्त माग विषय लिएर कुरा उठान होस् भन्ने हेतुले धर्ना प्रदर्शन गरिरहेको जन आन्दोलन पार्टीको कार्यक्रममा आज डा. हर्कबहादुर छेत्री उपस्थित थिए। उनीसित पार्टीका महासचिव नयन प्रधान, ब्यूरो सदस्य अमर लामा, चेली एकाईं प्रमुख प्रतिभा कुमाई लगायत पार्टीको युवा एकाईंका कार्यकर्ताहरू संसदअघि उपस्थित बनेका थिए।
पहाडमा मात्र तमासा गरेर अलग राज्य जस्तो महत्त्वपूर्ण माग विषय केहि नहुने कुरालाई मध्यनजर राखेर नै जन आन्दोलन पार्टीले दिल्लीमा कार्यक्रम गरेको बताउँदै डा. छेत्रीले दिल्लीले नै माग विषय लिएर सुन्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए। “यहिँ बाटो भएर सांसदहरू जान्छन्, सोही कारण हामी यहाँ अलग राज्यको माग लिएर धर्ना-प्रदर्शन गरिरहेका छौं”- उनले अझ भने।
डा छेत्रीले आफूहरूलाई अघिबाटै कतिपय सांसदहरूले गोर्खाहरूको माग विषय लिएर कुरा उठान गरिदिने प्रतिश्रुति दिएको दाबी गर्दै भने- “दिल्लीमा यो हाम्रो तेस्रो कार्यक्रम हो। अघिबाटै हामीलाई कतिपय सांसदहरूले हाम्रो मागबारे कुरा उठान गरिदिने प्रतिश्रुति दिएका छन्। आजदेखि हामी ब्यूरो सदस्यहरू उनीहरूसित भेट गरेर पुन: उनीहरूले दिएको आश्वासनबारे याद दिलाउनेछौं।”
चार फरवरीसम्म संसदमा बजेटको कुरालाई प्राथमिकता दिएर चर्चा भए पश्चात5फरवरीदेखि भने अन्य मुद्दाहरूमाथि पनि चर्चा हुने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँदै डा. छेत्रीले9फरवरीसम्मको बजेट सेसनमा गोर्खाहरूको माग विषय लिएर पनि कुरा उठान हुने आशा व्यक्त गरे।